समाज – SUDUR MEDIA
October 20, 2021 AdminLeaveaComment on अविरल वर्षाले धानबालीमा ठुलो क्षति…..
आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पाकेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । दसैँअघि नै जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा धान पाकेर पहेँलो भए पनि किसानले दसैँ चटारोका कारण धान काट्न भ्याएका थिएनन् । दसैँ टीका लगाएर किसान धान काट्न सुरु गरेका थिए । “दुई दिनसम्म धान काट्यौँ, अहिले लगातारको पानीले पाकेको धान सखाप पारेको छ, अब […]
‘पोलेको, भुटेको र अधिक बोसो भएको मासु सकेसम्म नखाऔं…..
October 11, 2021 AdminLeaveaComment on ‘पोलेको, भुटेको र अधिक बोसो भएको मासु सकेसम्म नखाऔं…..
दसैँ सुरु भएसँगै नेपालीको घरघरमा खसी, बोका, राँगा जस्ता रातो मासु हुने जनावरको मासु बढी प्रयोग हुने गर्दछ । चिकित्सकले भने रातो मासु पोलेर, भुटेर अधिक बोसो भएको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन् । यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसले मुटु, मिर्गाैला, मधुमेह, उच्च रक्तचापसँगै क्यान्सर हुने जोखिम बढ्ने उनीहरुले […]
जीवनमा आउने संकट हटाउन कुन राशिका व्यक्तिले के गर्ने ?
October 7, 2021 AdminLeaveaComment on जीवनमा आउने संकट हटाउन कुन राशिका व्यक्तिले के गर्ने ?
अत्यन्त परिश्रम र मेहनतका बावजुद पनि कुनै काममा सफलता पाइरहनु भएको छैन भने केहि दोष हुनसक्छ। जीवनमा आर्थिक समस्या आइरहेको छ वा रोकिएको धन फिर्ता भएको छैन भने राशी अनुसारको केहि उपाय गरेमा यो समस्या हटेर जाने धार्मीक मान्यता छ। जान्नुहोस् राशी अनुसारको उपायः मेष राशीः नियमित सूर्य देवको आराधना गरी लक्ष्मीनारायणलाई गुलियो खिर अर्पण […]
महादेवको नाम पशुपतिनाथ यसरी रहन पुग्यो…..
October 7, 2021 AdminLeaveaComment on महादेवको नाम पशुपतिनाथ यसरी रहन पुग्यो…..
रुद्र वा शिवका अनेकौं नाउँमध्ये ‘पशुपति’ शिवको प्रमुख नाउँ हो ।हिन्दू धर्मका सबै धार्मिक ग्रन्थहरूमा भगवान शिवलाई पशुपतिनाथ भनिएको छ । पशुपतिनाथको मन्दिर एक जीवन्त सम्पदाको रुपमा रहेको छ । जन्म देखि मृत्यु सम्मका संस्कार सम्पन्न गरिने यस पावन स्थलमा वागमती नदीले यसको महिमा अझै बढाएको छ । यो मन्दिर यस संसारमा रहेका २७५ पादल […]
आफ्नो जन्म मिति अनुसार अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय प्राप्त हुनेछ नसोचेको धन…..
October 6, 2021 AdminLeaveaComment on आफ्नो जन्म मिति अनुसार अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय प्राप्त हुनेछ नसोचेको धन…..
ज्योतिष शास्त्रमा वास्तु शास्त्रको धेरै महत्व रहेको छ । वास्तुशास्त्र र ज्योतिष शास्त्र एक अर्काको पुरक हुन । जबकी वास्तुशास्त्र अनुसार हरेक दिशामा केही न केही ग्रहसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यदि व्यक्तिको जन्ममिति अनुसार चारै दिशामा केही वास्तु चिजहरु राख्ने हो भने केही न केही लाभ मिल्ने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।यदि तपाईको […]
नारी यस्तो हुनुपर्छ ! एक असल नारीमा यी गुणहरु हुन्छन्…….
October 6, 2021 AdminLeaveaComment on नारी यस्तो हुनुपर्छ ! एक असल नारीमा यी गुणहरु हुन्छन्…….
विहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने, के नगर्ने ? जानी राखौं……
October 6, 2021 AdminLeaveaComment on विहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने, के नगर्ने ? जानी राखौं……
सामान्‍यतया मानिसहरु आफ्नो दैनिकी अनदेखा गरिरहेका हुन्छन् जसले उसको जीवन शैली नै ख’तरामा पर्न जान्छ । हामी हरेक दिन निदाउँछौं । बिछ्यौनामा पल्टिन्छौ र बिहानी पख उठ्छौँ । विशेषत विहान जब तपाइको आँखा खुल्छ, तब के गर्नु हुन्छ त ? के नगर्ने, गर्ने के ? १. बिहान ढिलासम्‍म नसुत्नुस्। ब्रम्हमू्र्तको समयमा उठ्नुस्। सूर्य उदाउनु अगाडि […]